ရည်ရွယ်ချက် – Department of Alternative Education
အရည်အသွေးအာမခံမှု၊ အသိအမှတ်ပြုခြင်း၊ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းဌာန
မူဝါဒ၊ စီမံကိန်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန
(က) ကျောင်းပြင်ပရောက် ကျောင်းနေအရွယ် ကလေး၊ လူငယ်နှင့် လူကြီးများ အခြေခံစာတတ် မြောက်ရန်၊ အခြေခံပညာရေးနှင့် သက်မွေးပညာရေးတို့ကို ပြီးမြောက်ရေးအတွက် ပညာရေး လမ်းသွယ် အမျိုးမျိုးဖြင့် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန်။
(ခ) ပညာသင်ကြားမှု အခွင့်အလမ်းနည်းပါးနေသော ကျောင်းပြင်ပရောက် ကလေး၊ လူငယ်နှင့် လူကြီးများအားလုံး အရည်အသွေးရှိသော ကျောင်းပြင်ပနှင့်တစ်သက်တာပညာရေးအစီအစဉ် များကို သာတူညီမျှ လက်လှမ်းမီ ရရှိနိုင်ရေးအတွက် ဦးတည်ဆောင်ရွက်ရန်။
(ဂ) ကျောင်းပြင်ပနှင့်တစ်သက်တာပညာရေးအစီအစဉ်နှင့် အခြားပညာရေးအမျိုးအစားများ အကြား အပြန်အလှန် ကူးပြောင်းသင်ကြားနိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းများနှင့် လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရောက် နိုင်ရေး အတွက် လူသားအရင်းအမြစ်လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရန်။
(ဃ) ကျောင်းပြင်ပနှင့်တစ်သက်တာပညာရေးအစီအစဉ်လုပ်ငန်းများ ခေတ်မီဖွံဖြိုးတိုးတက် စေရန်အတွက် သုတေသနနှင့် တီထွင်ဆန်းသစ်မှုများဆောင်ရွက်ရန်။
Total Users : 23676
Total views : 138630
မူပိုင် © ကျောင်းပြင်ပနှင့်တစ်သက်တာပညာရေးဦးစီးဌာန
ရုံးအမှတ်(၅၂)၊ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော် ဖုန်း-၀၆၇၃၄၃၀၅၁၉
Developed By Department of Alternative Education
Office No.(52), Oattrathiri Township, Nay Pyi Taw.
email - ict.dae@moe.edu.mm Phone : 067-3430519